काँधमा बोकेर बाघ फिर्ता
जुलाइ ३०, २०१४
जंगलको राजा बाघ । हिंस्रक जन्तु । यहि बाघ मान्छेको काँधमा । आजकाल बाघहरु गाउँ पस्न थालेपछि काँघमा बोक्नुपर्ने अवस्था आएको हो । जंगलको अनकन्टार ठाउँमा बस्नुपर्ने बाघहरु गाउँमा आतंक मच्चाउँदै हिँड्न थालेको भेटिएको छ ।...
किन रोयो यो जंगली हात्ती ?
किन रोयो यो जंगली हात्ती ? जंगलमा मन खुशि चर्न, बस्न, जिउन पाउँदा प्राय सबै जनावर बढि खुशि र स्वस्थ हुन्छन् । तर यि दुई (ठूलो भाले, सानो पोथी) मध्ये हेर्नुस् त भाले रोएको छ । केहि...
बलात्कारी जिवजन्तुका अनेक खाले अक्किल
जुन ९, २०१४
● ददि सापकोटा महिलाहरु किन बलात्क्रित हुन्छन् ? एक्लामाथि धेरैले जाइलागेर । शारिरिकरुपमै आफु कमजोर भएर । निशस्त्रलाई सशस्त्रले जाइ लागेर । अथवा वालवालिका भए फकाएर । जतिसुकै बलियो, कुशल र सशस्त्र भएपनि दश जनाले आक्रमण गरे...
छ महिनासम्म केहि नखाइ सुतेको सुत्यै कसरि बाँच्छ भालु ?
मे १३, २०१४
वर्षायामभरि ट्वाँट्वाँ कराउने भ्यागुता जाडोयाम लागेपछि कता दम्पट हुन्छन् कता । केहि सुइँको पाइन्न । सुलुल्ल सुलुल्ल हिँड्ने, मान्छे टोक्ने सर्पपनि जाडो लागेपछि कता बेपत्ता हुन्छन् कता । ति कहाँ जान्छन् ? हामीलाई कौतुहलता लाग्छ । वास्तबमा...
सिंह र बँदेलको घम्साघम्सी (फोटो फिचर)
अफ्रिकामा वार्थग भन्ने एक खाले बँदेलको हुन्छ । हो यो बँदेल देख्दै डर लाग्दो । लामा न लामा दाह्रा भएको हुन्छ । दक्षिण अफ्रिकाको केप प्रान्तको एलाफेन्ट पार्क भनिने निकुन्जमा गोरेटो पार गर्दा एक दिन वारथग (बँदेल)...
जिवजन्तुमापनि बुढाकै नेत्रित्व
अप्रिल २, २०१४
● ददि सापकोटा नेपाली कांग्रेसका सभापती रहेका शुसिल कोइराला उमेरले सत्तरी नाघे । तैपनि प्रधानमन्त्री बनेर देशकै नेत्रित्व लिन तम्सेका छन् । नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनाल, केपी ओली र माधव नेपाल नेत्रिवकै हानथापमा छन् । ड्यास...
साथी बनाउँछन् जनावरपनि
प्रेमी प्रेमीका मात्रै होइन । प्रणय दिवश आएपछि मानिसहरु कार्ड पठाउँछन् । ति कार्ड मार्फत कतिले आफ्ना लुकेका भावना ब्यक्त गर्छन् । सामुन्ने खोल्न नसकिएका प्रेमका भावना खोल्छन् । प्रेम हुर्किनुपर्छ भन्ने मात्रै छैन । त्यसले मित्रता...
क्यामरा देख्दा त चरापनि हुरुक्कै
मार्च ८, २०१४
क्यामरा मन नपराउने मानिस कमै हुन्छन् । वालवालिका, बुढाबुढी, युवायुवती सबै । क्यामराले धेरैलाई आकर्षित बनाउँछ । हुरुक्कै पार्छ । मानिसलाई त पार्नेनै भयो । चराहरुलाईपनि मानिसका थरी थरी क्यामराले हुरुक्कै बनाउँदो रहेछ । राम्रा क्यामरा ठडिएको...
बत्ती मुनि प्रेम गर्न त चरालाई’नी लाजै
फ्रेब्रवरी २७, २०१४
● ददि सापकोटा पती पत्नी । प्रेमी र प्रेमीका ओछ्यानमा । रमाईलो गर्ने मुड चलीरहेका बेला बत्ती फ्याट्ट बल्यो भने ? दखल गरिदिन्न ? मध्य रातमा जोडीहरु यौनका अनेक क्रियाकलापमा रमाईरहेका छन् । सडक सँगै जोडिएको छ...